उत्तम प्रयास, हार्दिक शुभकामना ! – Holistic Monthly : A Leading Magazine for Health & Life Style
उत्तम प्रयास, हार्दिक शुभकामना !
समय परिवर्तनशील छ । आधुनिक समय र पद्धतिका कारण आज विभिन्न सहजता तथा समस्याहरू उत्पन्न भैरहेका छन् । आफ्नो धरातल बिर्सेर मानिसले प्रकृतिलाई बेवास्ता गरिरहेको यस समयमा जीवनशैलीलाई ‘ब्याक टु दि नेचर’ को मार्गमा प्रेरित गर्ने महान् उद्देश्यका साथ प्रकाशित गरिएको ‘होलिस्टिक’ पत्रिकाले ‘आधुनिकता’ का नाममा थोपरिएको घाउमा थोरै भए पनि मलहम लगाउने काम गरेको छ ।
अहिले भएका आम सञ्चार मध्यमले ओगटेका भन्दा पृथक् खालका विषयहरू पस्कने जमर्को गरेको ‘होलिस्टिक’ ले स्वस्थ र व्यवस्थित जीवन जिउने तरिकाहरू सिकाएको छ । देशका कुना–कुनामा लुकेर रहेका जडीबुटीहरूबारे जानकारी दिँदै तिनको महत्त्वमाथि प्रकाश पारिएका सामग्री पढ्न पाउँदा नेपाली हुनुको गर्वबोध भएको छ । हामीले दैनिकीमा हेलचेक्र्याईं गर्ने विषयहरू– खानपिन, पोशाक, भान्छाको स्वास्थ्यजस्ता कुराहरू यसमा समेटिएको पाउँदा धेरै खुशी लागेको छ ।
हामीले के खान्छौं भन्दा पनि कति र कुन समयमा खान्छौं; कति समय सुत्छौं भन्दा पनि कुन समयमा सुत्छौं; कति पानी पिउँछौं भन्दा पनि कस्तो र कुन समयमा पिउँछौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । परिमाणात्मक भन्दा पनि गुणात्मक कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यस पत्रिकाको अध्ययनबाट थाहा पाउन सकिन्छ । कहिलेकहीं होटलको स्वादजस्तो खान मन लागेमा केमिकल नहाली घरमै विभिन्न स्वाद र भेराइटी बनाएर खान सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न परिकार बनाउने तरिका पत्रिकाबाटै सिकाउन थालिनु अत्यन्तै सराहनीय काम हो ।
हामी समस्याको समाधान मात्र खोज्छौं तर समस्या किन आयो भन्ने कारण खोज्दैनौं । यस पत्रिकाले रोगको उपचार मात्र होइन, रोग लाग्ने कारण र लाग्नै नदिने उपायको खोजी गरौं, त्यसबाट मात्रै दीर्घकालीन समाधान निस्कन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । आधुनिक चिकित्साको गुरु मानिने प्राचीन आयुर्वेद र जडीबुटीबारे यस म्यागजिनले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ । मानिसलाई लाग्ने विभिन्न रोगहरूले कसरी असर गर्छ र कसरी स्वास्थ्यलाभ हुन्छ भन्ने कुरा पत्रिका पढेर थाहा पाउँदा छुट्टै आनन्द पाइयो ।
अत्यन्तै सरल भाषाशैली र मिठो प्रस्तुतिका साथ खाद्यवस्तु, परिकार, तिनको महत्त्व, पाइने तत्त्वहरू र बनाउने तथा खाने तरिकाहरू उल्लेख भएको देख्दा रमाइलो लाग्यो । अमृतसरह भिटामिन र प्रोटिनको भण्डार रहेका अन्न बेचेर महँगा औषधि किनेर खानुपर्ने विडम्बनालाई ‘होलिस्टिक’ ले चिर्ने जमर्को गरेको छ ।
मानवजीवनमा घटना–दुर्घटनाहरू आइपर्छन्, तिनको सामना र समाधान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने प्रेरणादायी कुराहरू पनि समेटिनु यस पत्रिकाको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । मानिसले परिस्थिति अनुसारको मनस्थिति तयार पार्नुपर्छ; कुनै पनि काम सजिलो हुँदैन, सामना गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । हजारौंको भीड छिचोलेर यस म्यागेजिनका आगामी अङ्कहरू अझै निरन्तर अगाडि बढ्न र सफलताको शिखर चुम्न सफल होऊन्, हार्दिक शुभकामना !
– कर्ण थापा
तिलोत्तमा– ४, रूपन्देही